एलईडी सौर्य बत्ती
एलईडी ट्र्याक लाइट
तातो बेच्ने बीएस फ्लडलाइट
उच्च शक्ति ५० वाट IP65 डाउन लाइट
आकार नि: शुल्क EC डाउन लाइट
सर्वश्रेष्ठ बिक्रि HS सौर Floodlight
कोण समायोज्य ई ट्रैक प्रकाश
बी यूएफओ लाइट
IP65 डाउन लाइट जेनरेशन II
अत्यधिक सी स्ट्रीट लाइट को सिफारिश
IES उपलब्ध छ
हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस् किनमेल गर्न जानुहोस्
मोडेल शक्ति ब्याट्री क्षमता मंद उत्पादन आकार स्थापना पाइप व्यास
LPSTL-20C01 20W 1750-1860LM N 282x144x55mm ∅50 मिमी
LPSTL-30C01 ३० वाट 2620-2750LM N 282x144x55mm ∅50 मिमी
LPSTL-50C01 ५० वाट 4360-4470LM N 383x190x67mm ∅50 मिमी
LPSTL-100C01 १०० वाट 8990-9130LM N 453x232x92mm ∅50/60 मिमी
LPSTL-100C01- जी १०० वाट 8990-9130LM N 453x232x165mm ∅50/60 मिमी
LPSTL-150C01 १५० वाट 13750-14100LM N 592x272x108mm ∅50/60 मिमी
LPSTL-200C01 २०० वाट 18660-18930LM N 592x272x108mm ∅50/60 मिमी
जब तपाइँ स्ट्रीटलाइट को बारे मा कुरा गर्नुहुन्छ, ऊर्जा चूसने, महँगो र सजीलो राख्न को लागी यी सबै शब्दहरु तपाइँको दिमागमा आउँदैन। ग्लोबल वार्मिंग र हरित ऊर्जा खेती को वातावरण को तहत, एलईडी मा परम्परागत लाई परिवर्तन गर्न सरकार को लागी मात्र नभई नागरिकहरु को लागी सबैभन्दा अपरिहार्य चीज बन्छ।
लाइपर मा, हामी सधैं एक कदम अगाडी हाम्रो सडक बत्ती फिक्स्चर सुधार गर्न को लागी जान्छ। यही कारणले हाम्रा उत्पादनहरु सधैं उच्च सम्मान र रुचाइएको छ।
त्यसोभए, के हाम्रो सडक बत्ती किन्न लायक बनाउँछ? खैर, सी नेतृत्व सडक बत्तीहरु प्रदर्शन, सहनशीलता, दक्षता, र स्थायित्व को लागी बनाईएको हो।
उच्च प्रदर्शन र दक्षताउच्च गुणस्तर एलईडी संग सुसज्जित, सी श्रृंखला सडक प्रकाश 110LM/डब्ल्यू हाम्रो डार्करूम मा goniophotometer द्वारा परीक्षण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
आईपी ​​रेटिंगएक तातो राज्य २४ घण्टा अन्तर्गत पेशेवर पनरोक परीक्षण मेशिन द्वारा परीक्षण, यो IP66 पारित र बाहिरी स्थिति मा ठीकसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ।
IK—IK एकदम स्ट्रीटलाइट मा आयात छ। हाम्रो आइटम IK08 अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्म पुग्न सक्छ।
स्थायित्व र सहनशीलताe—कार हेडलाइट पीसी, पराबैंगनी प्रतिरोधी, यो एक लामो समय मा प्रयोग पछि पहेँलो मा बदलिनेछैन। -50 under -80 under अन्तर्गत चरम तापमान मिसिन द्वारा परीक्षण पछि, लाइपर एलईडी स्ट्रीटलाइट एक चरम -45-50 ℃ वातावरण मा संचालित गर्न सक्नुहुन्छ। AL6060 170-230 W/(MK) उच्च तापीय चालकता र हावा प्रवाह डिजाइन संग एल्युमिनियम सामग्री एक राम्रो गर्मी लंपटता प्रणाली प्राप्त। राम्रो विरोधी जंग कोटिंग जो विगत २४ घण्टा नमकीन स्प्रे परीक्षण को अनुमति दिन कोष शहरहरु मा उत्पादन राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै तथ्यहरु एक लामो जीवन अवधि को ग्यारेन्टी।
हामी CE, RoHS, CB, SAA प्रमाणपत्र छ। सम्पूर्ण श्रृंखला नेतृत्व सडक प्रकाश को लागी IES फाइलहरु उपलब्ध छ। Dialux वास्तविक साइट सिमुलेशन को अनुसार, हामी दुई प्रकाश र मात्रा को बीच अंतरराष्ट्रीय illuminance मानक प्राप्त गर्न को लागी दूरी को एक सल्लाह प्रदान गर्न सक्छौं।
यदि तपाइँ एक बन्द सडक बाटो प्रकाश समाधान को आवश्यकता छ, लाइपर तपाइँको लागी एक राम्रो विकल्प हो।
एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना निर्देश
स्थापना गर्नु अघि, कृपया निर्देशन पुस्तिका ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र भविष्यको उपयोगको लागी राख्नुहोस्।
1. अपरेटि personnel्ग कर्मचारीहरु सम्बन्धित प्रमाणपत्र, ज्ञान र कार्य अनुभव हुनु पर्छ। कार्य आवंटन प्रत्येक कर्मचारी को स्थिति र जिम्मेवारी अनुसार हुनु पर्छ।
२. सडक बत्ती मोड्युल को लेन्स प्रकाशिकी टेम्पर्ड गिलास बाट बनेको छ, कुनै लापरवाह ह्यान्डलिंग लेन्स स्क्र्याच हुनेछ। तेसैले स्थापना को प्रक्रिया मा, सडक बत्तीहरु लाई सावधानी संग सुरक्षित हुनु पर्छ। सडक बत्ती अनुहार जमीन मा अनुहार को मामला मा, यो नरम कपडा वा अन्य सुरक्षात्मक सामाग्री संग सुरक्षित हुनुपर्छ।
3. कुनै पनि स्थापना अघि बढ्न हुँदैन जब सम्म सबै शक्तिहरु बन्द छन्।
4. स्थापना सख्ती संग संचालन उपकरण र उपकरण को उपयोग सहित, सञ्चालन विनिर्देशों अनुसार सख्ती संग गर्नु पर्छ। उदाहरण को लागी: कार्य दायरा, चेतावनी लेबल, फ्ल्यास बत्ती, हेलमेट, र काम कपडा आदि।
5. स्थापना को प्रक्रिया मा, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि मौसम बाहिरी hgih बिजुली पावर काम को लागी उपयुक्त छ।
प्लेटफर्म लिफ्टिंग संग चेतावनी ट्रक, चेतावनी चिन्ह र टर्च सडक बत्ती स्थापना को लागी आवश्यक छ।
स्थापना र रखरखाव अगाडि बढ्नु हुँदैन जब सम्म सबै शक्तिहरु बन्द छन्।
रखरखाव पेशेवर कर्मचारीहरु द्वारा गरिनु पर्छ।
एलईडी सडक बत्तीहरु को स्थापना
चरण 1: सडक बत्ती को स्थापना शुरू
सडक बत्ती पछाडि पट्टि घुमाउनुहोस्, कुंडा मा3शिकंजा छोड्नुहोस्
चरण २: केबल जोड्नुहोस्
दीपक मा L, N, GND केबलहरु लाई सम्बन्धित L, N, GND केबलहरुमा बत्ती पोल मा जोड्नुहोस्।
शाखा सर्किट पावर फिक्स्चर पावर लीड्स को लागी, कालो देखि कालो (तातो), सेतो जबकि (तटस्थ) को लागी जान्छ। र हरियो देखि हरियो (जमीन)
चरण ३: एलईडी स्ट्रीट लाइट को निर्धारण
बत्ती पोल मा सडक बत्ती स्थापित, एलईडी सडक बत्ती तेर्सो स्तर को हुन को लागी समायोजन गर्नुहोस्। कुंडा मा3शिकंजा फास्टन
अघिल्लो: सबै एक बी सौर्य स्ट्रीट लाइट मा
अर्को: बी सौर्य स्ट्रीट लाइट
एलईडी सडक बत्ती
एलईडी सडक प्रकाश
एलईडी रोडवे फिक्स्चर
एलईडी स्ट्रीट लाइट 200w
एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता
रोडवे एलईडी प्रकाश
मोड्युल एक सडक बत्ती
हाम्रो उत्पादनहरु को बारे मा कुनै प्रश्न छ?
कृपया हामीलाई एक सन्देश छोड्नुहोस् र हामी तपाईंलाई ASAP फिर्ता आउनेछ।
Albrechtstraße १३१, १२१5५ बर्लिन, जर्मनी
IP 65 DOWNLIGHT Parkin को लागी सही विकल्प ...
शक्ति, प्रेम, beau बाट मित्रता ...
© प्रतिलिपि अधिकार - २०२०-२०११: सबै अधिकार सुरक्षित। प्राविधिक सहयोग: